TrueOS mutsivi wePC-BSD | Linux Vakapindwa muropa
PC-BSD ndeimwe yeakasiyana maBSD yatakawana, pamwe neFreeBSD, OpenBSD, Dragon Fly, NetBSD, nezvimwe. Kazhinji imwe yeaya maforogo anotarisana nechinangwa chakati, sekupa kwakawanda kuita, chengetedzo, kutakurika, nezvimwe. Panyaya yePC-BSD, inotungamirwa kudesktop, sezvazvinogona kutorwa kubva kuzita rayo, ndiko kuti, kuve desktop-inoshamwaridzana Unix inoshanda sisitimu. Vazhinji venyu muchava kutomuziva uye haadi maintroduction
Asi PC-BSD haisi iyo inoshanda system ichaenda nyeredzi muchinyorwa chino, asi TrueOS. Iwe unotoziva kuti iyi blog yakanangana neLinux, asi zvakare kusunungura uye kuvhura sosi software, saka takagara tichiedza kupa nzira kune dzimwe nhau dzedzimwe nzira dzakadai seBSD pamwe nezvimwe zvirongwa izvo kunyange zvisiri kuwanikwa kune Linux chikuva. yakavhurwa sosi kana yemahara. Saka hatidi kuita mutsauko ne TrueOS.
Kune avo vasingazive, TrueOS inoratidzwa sekushanduka kwePC-BSD iyo inoda kutiunzira zvese zvakanaka zveFreeBSD yenyika asi nenzira yakapusa uye ine hushamwari kune vedu vedu vanoshandisa nharaunda nharaunda, uye kwete chete kune makuru michina Iyo yazvino vhezheni ye TrueOS iyo inogona kuwanikwa panguva yekunyora iyi inoenderana ne12.0 Razvino vhezheni yeFreeBSD kodhi. Uye zvakare, haina kutevera yechinyakare yekuvandudza modhi, asi iri Rollin Kuburitswa, kune vakanaka nevakaipa veiyi modhi ...
Iyo ine chinhu chinodaidzwa chinonzi PersonCrypt izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire emushandisi maakaunzi nekunyorera kweakanyanya data kuchengetedzeka Iyo inouya neiyo Lumina desktop nharaunda (yakavakirwa paQt), saka inomiririra shanduko yakakosha kubva kune yechinyakare KDE yaive yakaverengerwa muPC-BSD. Ehezve, kwete chete iyo sisitimu yakagadziridzwa, asiwo mashandisiro uye izvi zvinogona kuwedzerwa zviri nyore neAppCafe. Chimwe chezvinhu zvinoshandiswa izvo zvinosanganisira Life Preserver iyo inoshanda pamwe chete neZFS nenzira yakakodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » TrueOS mutsivi wePC-BSD
Musi waGunyana 1, 2016, iyo PC-BSD timu yakazivisa iro zita reprojekti shanduko uye iyo inoshanda sisitimu yakave TrueOS
Pindura kuna juanjuanjo
Jorge Sepulveda akadaro
Ini ndinoda iyo BSD inoshanda sisitimu asi nekudaro nemifananidzo yakajeka Ini ndinoda kuti ishande kubva kumba muGraphics, madhirowa uye multimedia edition yekutenda yeiyo TrueOS Inoshanda Sisitimu, ini ndinoda
Pindura Jorge Sepulveda
Oracle Linux 7.3 yave kuwanikwa kune wese munhu